Zvaungaita Kuti Urege Kubvisa Kubva Kubasa Risina Kuda - Zano Rinobatsira Kubva Semalt
Kune kusiyana kwemaimeri iyo munhu aifanira kuzvidzivisa kubva pamusana pekuti haashumiri chero chinangwa uye icho munhu asingambofaniri kubvisa. Muchikamu chino, Michael Brown, Semalt Mutevedzeri weVatengi vanobudirira, anokurukura musiyano pakati pemapoka maviri aya achiita zvinokonzerwa nemamiriro ezvinhu akaitika kune umwe wevashandisi veIndaneti.
Muteereri akadaro akawana ma email asingakanganwiki pamusoro pekudya mapiritsi uye zvipfuwo zvekudya. Icho chakanga chiri chinotyisa uye chinosuruvarisa kubvisa mairi emairi 100 nguva imwe neimwe pavaiongorora email yavo. Kuronga kuburikidza ne maimeri uye kutora mumwe pashure peimwe kubvisa kwakaoma sezvavasingazivi kuti zvakachengeteka sei kuti tive nekuzarura chero - mongodb charting.
Vashandisi vepaIndaneti vangawana izvi zvichivhiringidza, asi kunyange zvakadaro, munhu anofanira kusiyanisa pakati peiyo email inoda kubvisa uye iyo isingaiti. Kuita kukanganisa kwekusabvisa kubva pamakakosha emaimeri kunogona kuva nemigumisiro yakaipa kune mumwe munhu. Kutevera ndiko kutsanangurwa nei, nemitemo inoshanda.
Usazvitsaura kubva kune spam
Zita rakakosha kupfuura iyi yehuwandu hwemamwe mairi asina kudiwa ndeye spam. Spam emails havana kero ye email yavanotarisira. Pane kudaro, vanokuvadza vanovatumira kune mazita asingatauri zvinoreva kuti hapana kubhadhara kunoratidzika.
Sezvo pasina kubhadhara mumwe achiyeuka kusayina, mumwe munhu haafaniri kunetseka nezvekusabvisa pane chero chinhu.Kana munhu akaedza kunyorera pane bhodhi risina kubhadhara, pane mikana yakakura yokuti ichawedzera mamiriro ezvinhu.Kubvunzurudza kuti nei kune bhodhi risina kubhadhara asi pakanga pasina kubhadhara kwakaitwa? Mhinduro iri nyore, vatengesi vanonyanya kufungidzira.
Sezvatambotaurwa, spam emails inoguma mumakero e-mail asingashandisi. Nokudaro, nguva iyo munhu anogamuchirwa achitsinhanisa pane bhodhi risina kubvisa, iyo hacker inogamuchira chiziviso chinoratidza kuti email inotarisa inoshanda zvechokwadi. Iko pakarepo vanoona kuti email iri kurarama, ivo vachawedzera kuedza kwavo mukutumira zvimwe spam. Pane imwe nguva vashandisi vanotsvaga pakutsvaga bhodhi, vanoguma vachigamuchira zvakanyanya spam kupfuura kare, ndizvo zvavanofanira kuzvidzivirira pamutengo wose.
Zvimwewo, pane sarudzo yekutendera mameyumu se spam ndizvo izvo vanhu vanofanira kuita panzvimbo yeemail email. Kunyange zvakadaro
Usazvitsaurira kubva pazvinhu zvaunoziva zvakasimudzira
Kana munhu akagadzirira kumira kugamuchira maimeri kubva kune imwe yenzira yepamutemo, nyanzvi dzinotaura kuti zvakachengeteka kushandisa sangano rakapiwa kuti rirege kubvisa. Mumwe haafaniri kumurondedzera se spam sezvo zvingaita kuti vamwe vanhu vabhadhare iyo kuti varege kugamuchira mazano akadaro.
Mitemo yekutsvaga iyo email ipi inofanirwa kana kuti isingafaniri kubvisa kubva kune yakananga.
Kana munhu akanyorera chimwe chinhu chakafanana nepepanhau, uye sarudza kuti hongu kugamuchira mamwe mashoko. Kana pakave nehukama hwebhizimisi munguva yakapfuura, saka pane huwandu hwakakosha hwekutsvaira mameseji uye kubvumira kusabvumirana kunobatsira hakuzoiti chakaipa.
Kana munhu asingatauri nemutumeri kana chipi zvacho chaanokurudzira, kubvumira kubatana kungaunza mamwe matambudziko.